12 / 07 / 2021 12 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 234 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၇၆ Colosseum, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, ၂၁၃၂၃ Grand Piano, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, 42100 Liebherr RR 9800 တူးဖော်, 43197 အဆိုပါရေခဲပြင်ရဲတိုက်, 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, 76178 နေ့စဉ် Bugle, Creator Expert, Disney, VIP အမှတ်နှစ်ချက်, ရေခဲသော, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Lego, Lego Creator Expert, Lego Disney, Lego အေးခဲ, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Lego Technic, Lego VIP, Lego VIP ဆုလာဘ်များ, Marvel, Spider-Man, နည်းပညာ, VIP, vip အချက်များ, VIP ဆုများ, VIP ဆုပေးစင်တာ
နောက်ထပ်နှစ်ဆ VIP အမှတ်ပွဲများကိုတရားဝင်စတင်ခဲ့သည် Lego အွန်လိုင်းစတိုး, ဒါကြောင့်အကြီးမားဆုံးအစုံအချို့ကိုဝယ်ခြင်းအားဖြင့်ထက်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအားသာချက်ယူအဘယ်သို့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်း?
Lego VIP ချေးငွေသည်ဆောက်လုပ်သူများအတွက်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ လာမည့် ၀ ယ်ယူမှုများမှငွေများရယူခြင်းမှသည်အချို့အပါအဝင်သီးသန့်ထုတ်ကုန်အချို့ကိုရွေးထုတ်ခြင်းအထိဖြစ်သည်။ ဆိုင်းငံ့ addon packs သူတို့ကိုအကြားရောင်စုံနှင့်အကြောင်းအရာအလိုက်အပိုင်းပိုင်းပဒေသာနှင့်အတူ။
သင့်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးအားကောင်းလာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြီးမားသောစာရင်းအနည်းငယ်ရှိသည် Lego ကန့်သတ်သောအချိန်ဖြစ်ရပ်အတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံး VIP အချက်များသို့သင်ရနိုင်မည့်မော်ဒယ်များ။
6 - 76178 Daily Bugle
မှနောက်ဆုံးပေါ်ဖြည့်စွက်တစ် ဦး အဖြစ် LEGO.com, Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle တရားဝင်ပထမ ဦး ဆုံးနှစ်ဆ VIP အချက်များအဖြစ်အပျက်ကိုတရားဝင် ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေါင် ၂၇၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၉၉.၉၉ / ယူရို ၂၉၉.၉၉ ဖြင့်ကုန်ကျမည့် ၃၇၇၂ အမြင့်ရှိမိုးမျှော်တိုက်အဆောက်အအုံတစ်ခုအနေဖြင့် ၀ ယ်ယူမှုအရသင်သည်များသောအားဖြင့်ရမှတ် ၂,၂၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်သော်လည်းဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိစုစုပေါင်းအချက်ပေါင်း ၄,၄၀၀ သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပုံများလောက်နီးပါးတန်ဖိုးရှိသည့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် Spider-Man!
5 - 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley
တစ် ဦး မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရပ်ရှည်ရှည်ကနေအပေါ် Moving Lego အထူးသဖြင့်ရှည်လျားသောတည်ဆောက်မှုအတွက်မော်ဒယ်လ်, Wizard World သို့သွားကြစို့။ ဟယ်ရီပေါ်တာ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley တစ်မီတာအကျယ်အ ၀ န်းကိုပေါင် ၃၆၉.၉၉ / ၃၉၉.၉၉ / ယူရို ၃၉၉.၉၉ ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
များစွာသောသီးသန့်အသေးစားနှင့် p အဖြစ်မှော်အံ့သြစရာနှင့်အတူart တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံ၏, VIP အချက်များကိုနှစ်ဆအဖြစ်အပျက်မပါဘဲပင်ထိုအရာသည်တန်ဖိုးရှိပုံရသည်။ သို့သော် Diagon Alley သို့သွားမည့်ခရီးသည်ယခုလအတွင်းသင်၏ပြက္ခဒိန်တွင်ရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်သူများသည်သူတို့၏အကောင့်တွင်အမှတ်ပေါင်း ၅,၉၂၀ ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
4 - 42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော်
သင်တို့အထဲ၌ရှိသောသင်တို့အထဲ၌မော်တော်အရူးအဘို့, ဖြစ်ကောင်းတစ်ခရီး Lego နည်းပညာ သင်ရှာနေတာက ဒီစာရင်းမှာပါတဲ့မော်ဒယ်ဟောင်းတွေထဲကတစ်ခု၊ 42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော် နေဆဲအတွက်ပိုမိုမကြာသေးမီပါဝင်နိုင်မှတက်မတ်တပ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲ Lego Group ၏ catalog ။
CONTROL + အက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးပြီးတည်ဆောက်သူများသည် ၄,၁၀၈ အပိုင်းအစကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ဥယျာဉ်ကိုတူးရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုသည်ကိုသင်မပြောနိုင်ပါ။ စျေးနှုန်းသည်ပေါင် ၃၉၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၄၄၉.၉၉ / ၄၄၉.၉၉ ဖြစ်၍၊ VIP ရမှတ် ၆,၄၀၀ ရရှိမည်။
3 - 10276 Colosseum
မဖြစ်နိုင်ဘူး အကြီးဆုံး Lego မဆိုကြာကြာ set ပေမယ့် ၁၀၂၇၆ colosseum နေဆဲအပေါ်စျေးအကြီးဆုံးမော်ဒယ်များတ ဦး ဖြစ်ပါတယ် LEGO.comနှင့်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောစျေးနှုန်းအချက် (အနည်းဆုံးအနည်းဆုံး) စစ်မှန်အပန်းဖြေမသာဆိုလိုသည် အခုအတွက်တော့) ရှေးဟောင်းကမ္ဘာ၏အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်း VIP အကြွေးများစွာသည်အထူးသဖြင့်သူတို့နှစ်ဆသောအခါ။
သငျသညျအပျေါမှာလိုက်မီရန်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ် Creator Expert တည်ဆောက်ခြင်း၊ သင်၏ VIP အကောင့်ရှိစုစုပေါင်းအမှတ် ၇၂၀၀ ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်မျှော်လင့်သည်။
2 - 21323 Grand Piano
Lego Ideas inarguably အဆိုပါထဲကနေထူးခြားတဲ့မော်ဒယ်များအချို့၏မူလနေရာဖြစ်သည် Lego ဒါကြောင့်တစ် ဦး ရှိမရှိ Group မှ လွမ်းဆွတ်တဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုပြန်သွားပါ သို့မဟုတ်တစ် ချစ်သူတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ကျန်ရှိနေသေးသည့်တည်ဆောက်ပုံနှင့်နီးသောအချက်များကိုကောက်ယူရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဆောင်ပုဒ်မှရှေးဟောင်းဖန်တီးမှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ။
၂၁၃၂၃ Grand Piano ၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားပြီး၎င်းကိုပူးတွဲပါအက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်သီချင်းများဖွင့်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းပေါင် ၃၁၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၃၄၉.၉၉ / ၃၄၉.၉၉ ဖြင့်ယူရို ၅.၉၂၀ အတွက်ပုံမှန်ပွဲများထက်ရမှတ် ၂,၉၆၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
1 - 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်
ဤစာရင်း၏အဆုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ငါးနှစ်ကျန်ခဲ့သည့်တစ်ခုထက်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်တည်ဆောက်သူများစွာပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီဖြစ်သည် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် ဒါပေမယ့် Lego Group မှထင်ရသောကြီးမားသောသူတို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကိုတိုးချဲ့ Disney နှင့်အတူရဲတိုက် 43197 အဆိုပါရေခဲပြင်ရဲတိုက်အကယ်၍ သင်မရှိသေးလျှင်ဒီအချိန်သည်အမီလိုက်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အထင်ကရရဲတိုက်ရှိအုတ် ၄၀၈၀ နှင့်အသေးစားဓာတ်ပုံငါးခုသည်သင့်အားမသွေးဆောင်နိုင်လျှင်ဝယ်ယူမှုတွင် VIP အချက် ၄၈၀၀ ရှိပါသလား။
←7Lego Star Wars အပေါ်နှစ်ဆ VIP မှတ်ဂိုးသွင်းရန်သတ်မှတ်
Lego Marvel Avengers classic အစုံ 2022 များအတွက်ကောလဟာလသတင်းများအရ →